Ebili ọkụ nke na -emebi ndekọ na Spain: ógbè ndị emetụtara na mgbe ọ ga -akwụsị | Meteorology netwọkụ
Oké okpomọkụ nke na -emebi ndekọ na Spain: ógbè ndị emetụtara yana mgbe ọ kwụsịrị
Emilio Garcia | 18/08/2021 08:49 | Ihe gbasara ihu igwe, Ebili mmiri ọkụ
A okpomọkụ ife na eruola ogo Celsius 50 n'ọtụtụ mpaghara Spain Ọ hapụla anyị ihe nkiri nke anyị na -ahụbeghị kemgbe ọtụtụ afọ. N'akụkụ ụfọdụ nke Spain, dị ka Andalusia, ọtụtụ ógbè erutela oke okpomọkụ.
Obodo anyị na -abụkarị mba na -ekpo ọkụ, n'ezie, mana ihe anyị na -enweta ụbọchị ndị a bụ imebi ndekọ n'ụzọ ọ bụla. N'oge post a, anyị ga -akọwakwu ntakịrị etu anyị si agafe oke ọkụ a na Spain, ihe ndekọ anyị mebiri ya na karịa, anyị ga -enye ezigbo ego. na -atụ aro ka ị gafere oke ọkụ ka mma na anyị na -ebi ụbọchị ndị a na Spain.
1 Kedu ihe oke ọkụ pụtara na Spain?
2 Kedu mgbe ebili mmiri na Spain na -akwụsị?
3 Ndụmọdụ maka ebili mmiri
Kedu ihe oke ọkụ pụtara na Spain?
Agencylọ Ọrụ Meteorological nke steeti, nke a makwaara dị ka Aemet, ahapụla anyị data anyị na -eruteghị ogologo oge na mpaghara na ógbè dị iche iche nke Spain. Dịka anyị hụla na blọgụ onye ama ama na -ahụ maka ọnọdụ ihu igwe, César Rodríguez Ballesteros, nke National Bank of Climatological Data of the Spanish State Meteorological Agency, Saturdaybọchị Satọde gara aga anyị ruru ndekọ mba dị iche iche:
Ọ dịtụbeghị mgbe anyị ruru oke okpomoku dị otú a na Spain, 37,77 ogo.
Na Fraịde, ụbọchị 13, ọ na -abanye na ikpo okwu wee nọrọ ebe nke atọ n'ihe gbasara ọnọdụ okpomọkụ mba na ndekọ nke ogo 36,92.
Ma ị nwere ike na -eche ihe bụ ụbọchị kacha ekpo ọkụ na mba na Spain. Kpọsị, anyị ga -alaghachi azụ na Ọgọst 10, 2012 yana oke okpomọkụ 37,87 degrees Celsius na Spain.
Kedu mgbe ebili mmiri na Spain na -akwụsị?
Ọ dị ka nke nta nke nta ebili mmiri a na Spain na -ebelata na ọnọdụ okpomọkụ ga -agbada n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ, mana anyị agaghị atụkwasị onwe anyị obi ka ha ka na -ebu amụma ọtụtụ ụbọchị oke oke ọkụ n'ọtụtụ mpaghara.
N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Spain, okpomọkụ ga -adịkwa oke elu ọzọ. N'etiti etiti Madrid karịa otu. Ma ọ bụrụ na anyị a attentiona ntị na maapụ ndịda na agwaetiti Canary, ọtụtụ ebe nwere ike iru okpomọkụ karịa ogo 40.
Maka nke a, Agencylọ Ọrụ Meteorological Steeti na -ejigide agba oroma dị ka ihe ịdọ aka na ntị na ha ka dị Mpaghara 10 nọ n'oké ihe egwu. Mpaghara ndị a bụ ndị a: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Seville, Albacete, Almería, Málaga na Cuenca.
Ọzọkwa, n'ime mpaghara iri a, anyị na -ahụ ọtụtụ nke Agencylọ Ọrụ Meteorological nke steeti na -akọwa dị ka nke ahụ n'ime ọtụtụ ụbọchị ha ga -enwe ihe ngosi na -acha ọbara ọbara. Nke ahụ bụ, ógbè ndị ahụ niile anyị ga -agwa gị ugbu a ga -agafe oke okpomọkụ nke oge ọkọchị ndị ọzọ nwere ike ịhụ.
Mpaghara ndị ahụ ga -anọ na nchegharị uhie dị ka Aemet si dị kpam kpam ógbè niile nke obodo Andalusia ewezuga Malaga na Almería, nke ga -adịgide na njikere oroma dị ka anyị tụlere na paragraf gara aga.
Ndụmọdụ maka ebili mmiri
Dịka anyị kwuru, ebili mmiri ahụ ga -aga n'ihu ụbọchị ole na ole dịka onye ibe ndụ anyị na Spain. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ ka nọ na mpaghara nwere akara oroma, site na Aemet anyị na -akwado ndụmọdụ dị iche iche ka ị wee nwee ike ịgafe oke okpomọkụ a.
Ọtụtụ n'ime ndụmọdụ ebili mmiri ndị a nwere ezi uche, mana ọ ka mma karịa nwute. Yabụ, soro ha n'akwụkwọ ozi, dịka ha dị oke mkpa ịlanarị na ọnọdụ okpomọkụ dịka nke anyị na -enwe.
Ọ bụrụgodi na ị chere na ọ bụ naanị anyanwụ ị nwere ike ịta ahụhụ ọkụ ọkụ, ọrịa strok na ọdịda, isi ọwụwa na ihe mgbaàmà ndị ọzọ ị kwesịrị ịgakwuru GP gị. Nke a bụ ndụmọdụ 13 anyị chịkọtara ka ị nwee ike ịgafe oke ọkụ a na Spain:
Zere ịpụ n'oge kacha ekpo ọkụ
Echekwala ị drinkụ mmanya. Na -agba mmiri mmiri mgbe niile na mmiri ọ freshụ freshụ.
Erila nri buru oke ibu. Gbalịa rie nri.
Ejila nri caffeine, shuga na mmanya n'ụba. Ha na -akpọnwụ na ị chọrọ nke ọzọ.
Zere ime egwuregwu n'ime awa nke oke okpomọkụ.
Curezụta yi okpu ma ọ bụ okpu na ihe ndị ọzọ na -egbochi okpomọkụ ma ọ bụrụ na ị ga -apụ apụ.
Mechie ụlọ n'oge ehihie na mepee ihe niile ogologo abalị niile.
Jiriopaque na -agagharị.
Ịsa ahụ na mmiri oyi ma ọ bụ na -ekpo ọkụ.
Y’oburu ntụ oyi, jiri ya mee nke ọma. Agala n'elu mmiri na -ahapụ oke okpomọkụ. Ị nwere ike ịrịa ọrịa ọkụ mgbe ị na -apụ apụ.
Ekwela ụmụ anụmanụ n'ụgbọ ala na anyanwụ. Ma ọ bụghị maka mmadụ. Ventilate ụgbọala ahụ.
Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ike nwee mgbaàmà ọ bụla nke ọrịa strok, gakwuru dọkịta gị tupu ịme ihe ọ bụla.
Kedu otu esi ebi ndụ ebili mmiri a? N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ibi n'akụkụ osimiri ma nọrọ ezumike, ọ ka mma karịa, ọ dị mma? Ndị na -enweghị osimiri, osimiri na ndị na -enweghị ike ịgbanahụ n'ụzọ ọ bụla agaghị enwe nhọrọ ọzọ karịa ị drinkụ mmiri dị ụtọ rie ice cream, nke na -adịghịkwa njọ.
Hapụ anyị na nkwupụta kedu ihe obere aghụghọ ndị ahụ ị na -eji ka mma gafee oke okpomọkụ dị otú a dị ka ndị anyị na -ebi ụbọchị ndị a na Spain!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké okpomọkụ nke na -emebi ndekọ na Spain: ógbè ndị emetụtara yana mgbe ọ kwụsịrị
Ọbara Snow ma ọ bụ snow na -acha ọbara ọbara: anyị na -agwa gị ihe kpatara ya
Kedu ihe bụ satịlaịtị